07 / 06 / 2021 07 / 06 / 2021 Rachael ဒေးဗီးစ် 278 Views စာ0မှတ်ချက် 30343 McLaren အဲလ်ဗာ, 76902 McLaren အဲလ်ဗာ, ဝယ်ယူမှုနှင့်အတူလက်ဆောင်, GWP, Lego, ဝယ်ယူမှုနှင့်အတူ Lego လက်ဆောင်ပေးမယ်, LEGO Group, Lego Speed Champions, LEGO.com, shop.LEGO.com, Speed Champions, အဆိုပါ LEGO Group, VIP, VIP ဆုပေးစင်တာ
မင်းရဲ့လွတ်လွတ်လပ်လပ်လွတ်သွားမှာမဟုတ်ဘူး Lego အထူးကမ်းလှမ်းမှု st နှင့်အတူ 30343 McLaren အဲလ်ဗာ,artမနေ့က ing ။
ဤလသည် Lego ဇွန်လ ၆ ရက်မှဇွန် ၂၀ ရက်အထိသို့မဟုတ်စတော့ရှယ်ယာများကြာရှည်နေချိန်တွင် Group သည် ၀ ယ်ယူမှုအားလုံးကိုဒေါ်လာ ၃၀ ကျော်အတွက် ၃၀၃၄၃ McLaren Elva ကိုအခမဲ့ကမ်းလှမ်းသည်။ အကယ်၍ သင်သည် set ကိုအားသွင်းစရာမလိုလိုလျှင်မြန်စွာရွေ့လျားလျှင်အကောင်းဆုံးဖြစ်လိမ့်မည်။
တကယ့်ဘဝဖြစ်သည့် McLaren Elva သည် ၂၄၉ ခုသာထုတ်လုပ်နိုင်ပြီးရရှိနိုင်သည်။ အနည်းဆုံးတော့အုတ်ဖြင့်တည်ဆောက်ထားသောဗားရှင်းပေါ်တွင်သင်၏လက်ကိုရယူရန်နှင့်သိသိသာသာစျေးသက်သက်သာသာဖြစ်ရန်ဖြစ်နိုင်သည်။ သင်သည်သင်၏အသေးစိတ်အတွက်ရှာဖွေနေလျှင် Lego McLaren လည်းရှိတယ် Lego Speed Champions 76902 McLaren အဲလ်ဗာ အရာရှိတ ဦး ကနေဝယ်ယူရန်ရရှိနိုင်ပါ Lego စတိုးဆိုင်များနှင့်အွန်လိုင်း။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြည့်အဝပြန်လည်သုံးသပ်ထွက်စစ်ဆေးပါ ဒီမှာ.
သင်စျေးဝယ်နေစဉ်ယခုပင်၎င်းသည်မှတ်ပုံတင်ရန်အချိန်အခါကောင်းတစ်ခုဖြစ်သည် Lego VIP ။ မည်သည့် VIP အသင်းဝင်အသစ်မဆိုလက်ခံရရှိလိမ့်မည် အခမဲ့ LEGO အပြာသော့ချိတ်, နောက်တဖန်သာစတော့ရှယ်ယာရရှိနိုင်ပါသည်နေစဉ်။ ထို့အပြင်ဤဆုသည်သင်၏စိတ်ကူးကိုမရင့်စေလျှင်၊ အခြားပရိုမိုးရှင်းအားလုံးကိုရှာဖွေပါ အသစ်အစုံ ဇွန်လအတွက်ရရှိနိုင် ဒီမှာ.
← Lego Marvel fan သည်သူတို့ကိုယ်ပိုင်လှည့်ကွက်များကို ၄၀၅၁၆ လူတိုင်းက Awesome ကိုထည့်သည်
၇၆၃၉၂ Hogw ကိုအသေးစိတ်လေ့လာပါartWizard ရဲ့စစ်တုရင် →